Schrödinger GV’r · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2021 11:56 GMT
Efa an-taona maro izay no tsy naha-mpikambana navitrika ahy tato amin'ny Global Voices ary nizorako tamina làlana hafa tety anaty habaky ny aterineto. Na izany aza, indraindray dia mandramby ahy ny fahatsiarovana ary dia mikarakara fihaonana aho, toy ny an'ireny mpianatra maintimolaly ireny, saingy ho ahy samirery ihany. Fa vao nampahatsiahivin'i Nevin-ilay-malina tamiko ny andro, dia niandry tamim-pientanentanana aho, ary rehefa tonga ilay andro dia nanomboka nandefa lahatsoratra ho an'ny kaonty Instagram an'ny GV aho nandritra ny herinandro.
Hiteny ianareo hoe “tsy mampihomehy nefa toa sahala amin'ny adidy” ilay izy, dia izao, raha ny marina, iray amin'ny fidirambolako ny fitantanana vondrompiarahamonina (community manager) ho an'ireo orinasa madinika, nefa rehefa manao azy io ho an'ny GV aho, toa tsy mba toy ny asa ho ahy mihitsy ilay izy, ny fanampin'izay, tena nankafiziko ilay izy. Manana ny fifaliana kely entiny ilay raharaha, toy ny hoe rehefa misy olona fantatro manome ‘Tia’ ny zavatra nalefako: Claire nitia azy! Sanjib koa! ary tsaroako ny resaka sasany na ny fotoana niarahantsika naka sary (izany no ampaham-potoana toy ny hoe fihaonan'ireo mpianatra maintimolaly, aleo lazaiko).
Matetika aho mandefa sary na lahatsarin'izay zavatra tena tiako ny manao azy, dia fitsngantsanganana lavitra. Fa tamin'ity indray mitoraka ity, (eny, ao anatin'ny herinandrom-pifaliako aho mandefa zavatra ao amin'ny Instagram an'ny GV) nanapaka hevitra aho ny hikarakara zavatra iray manohina ahy akaiky: ireo hetsipanoherana ao Kôlômbia. Tsy hiresaka momba azy io aho, fa raha tianareo ny hahafantatra, vakio ireo lahatsoratra mahatalanjona momba azy ato amin'ny GV ary tsidiho ny kaontinay ao amin'ny Instagram.
Nefa ambarako anareo fa noho ny antony tsy takatro amin'ny maha-mpitantana vondrompiarahamonina ahy, lasa niparitaka be ny iray amin'ireo lahatsoratra navoakako. Tsy sahiko ny hilaza hoe io no lahatsoratra be mpitia indrindra ao amin'ilay kaonty, fa farafaharatsiny, araka ny antontanisa anatiny, io no iray manana mpitia be indrindra hatreto, amin'ireo izay navoaka tato anatin'ny taona roa farany.
Ankoatra ireo zavatra vitsivitsy izay tsy misy afa-tsy tarehimarika tsinontsinona monja ihany, ny sisa tavela dia ny fahafahampo hoe nandray anjara nitondra anjara biriky tamin'ny tanjona fototra, izay raha ny tranga resahana eto dia ny fanaovana ho hitan'ny besinimaro ny toedraharaha saropady sy maharary lalovan'ny firenena iray mpifanolo-bodirindrina ao Kôlômbia, mitovitovy amin'ny ampahany amin'izay niainanay taty Però tamin'ny taona lasa.
Dia izay, tsy hanelingelina anareo intsony aho, handeha aho hitady votoaty ho alefa ato anatin'ireo andro manaraka, fa dia tohizo ny fitsiditsidihana ahy e!